China 50ml Cosmetic Luxury Packaging orinasa sy mpanamboatra | Comi
50ml fonosana mihaja kosmetika
Item No. 50ML: KMCB50-017
Item No. 40ML: KMCB40-016
Item No. 30ML: KMCB30-015
Item No. 20ML: KMCB20-014
Item No. 30ML: KMCB30-013
Tavoahangy boribory misy tavoahangy fitaratra sy pipeta, ary akorandriaka vita amin'ny aluminium eo ambonin'ny tavoahangy sy vozon'akanjo
Varavarana: Shell Shell
Tavoahangy: Glass miaraka amin'ny Shell Aluminium
Manome tavoahangy fitetezana fitaratra avo indrindra izahay. Amin'ny safidy loko. Amber manolotra fiarovana avo indrindra amin'ny jiro UV, manao an'io safidy mazava ho azy ho an'ny fifangaroana ilaina amin'ny aromatherapy.
Ny tavoahangy fitetezana fitaratra fitaratra dia tonga lafatra amin'ny fijerena ny vokatrao mankany amin'ny ambaratonga manaraka ny matihanina. Tonga lafatra indray ho an'ny vokatra marobe avy amin'ny menaka fandroana ka hatramin'ny menaka volombava.
Ny tavoahangin-dranomaintsinay dia tsy afafafa tahaka ny safidy hafa mora vidy eny an-tsena. Manolora endrika voajanahary amin'ny marikao. Tonga lafatra amin'ny menaka manitra sy menaka manitra. 5ml - 100ml misy karazana kapila mifanentana mifanaraka aminy.
Farany fa tsy izay ihany fa ny tavoahangin-tsinay mazava tsara dia tsara ho an'ny menaka vape sy fofona farany. Mety ho an'ny vokatra fikarakarana lehilahy ihany koa. Azo alaina amin'ny safidy fanidiana arakaraka ny vokatrao!
Tavoahangy fitaratra mpamatsy tavoahangy fitetezana fitaratra!
KMCB50-017 50ml 48.5mm 99mm 86g
KMCB40-016 40ml 48.5mm 87mm 66g
KMCB30-015 30ml 48.5mm 81mm 63g
KMCB20-014 20ml 48.5mm 63mm 55g
Serum, menaka tena ilaina
KEVITRA / TYPE
Previous: 40ml mpamatsy kaontenera hatsaran-tarehy
Manaraka: Fonosana kosmetika tavoahangy 25ml Dropper
fonosana kosmetika tsara indrindra
fonosana fikarakarana hoditra tsara indrindra
fonosana kosmetika tavoahangy
tavoahangy kosmetika betsaka
tavoahangy kosmetika mazava
JEREO IHANY NY MPIVAROTRA
Tavoahangy serum boribory 15ml
15ml Fonosana kosmetika tsy manam-paharoa Press Dropper
20ml Tavoahangy mitete maso
30ml China mpanamboatra tavoahangy mangatsiaka mazava ...
Tavoahangy fitaratra 30ml misy pipette mandeha ho azy ...
Fonosana kosmetika tavoahangy 30ml
Ny dikan'ny marika amin'ny ilaina oi ...
Ahoana ny fisafidianana ny fahaiza-manao sy ny fonosana ...